Ungasithatha Kanjani Isithombe Esingcono Kakhulu se-3D - LucidPix
Ungasithatha Kanjani isithombe Esingcono Kakhulu se-3D
Ungasithatha Kanjani isithombe Esingcono Kakhulu se-3D ngeLucidPix
Ukuthatha izithombe ze-3D kungumkhuba okhuphukayo phakathi kwabathwebuli bezithombe, amabhizinisi kanye nomuntu ngamunye ofuna ukuzihlola izithombe zabo. Ukukhangiswa kwezithombe ze-3D kudonswa esifisweni sokuhluka. Njengoba bonke abantu kulezi zinsuku bethola amakhamera edijithali noma izingcingo ezinamakhamera, abantu badinga indlela yokwenza izithombe zabo zibonakale esixukwini. Lapha yilapho kungena uLucidPix. Isiqondisi esingezansi sinikeza amathiphu wokuthi ungathatha kanjani best I-3D Photo isebenzisa iLucidPix.
Amathiphu namaqhinga wokuthatha isithombe esihle kakhulu se-3D
Yeqa ukulinda: Uma uyinkosi ye-Photoshop, amathuba uyokwazi ukuthi enye yezindlela zokudala izithombe ze-3D iwukuthi Photoshop kubo kwikhompyutha yakho yedeskithophu. Kodwa-ke, lokhu kunzima kakhulu kunokuba kubonakala. Kungathatha i-chunk enkulu osukwini lwakho ukudala imephu yokujula kwekhwalithi elingana neqiniso. Esikhundleni salokho, uLucidPix unikeza enye indlela esheshayo futhi elula yokusiza ugcine isikhathi sakho. I-AI ethuthukisiwe efihlwe ngaphakathi kweLucidPix ikuvumela ukuthi ukhiqize izithombe ezisezingeni le-3D ngamompompi nje ambalwa wesikrini se-iPhone yakho noma i-Android.
Bamba izinto ngokujula: Ukujula okuhambisana nesithombe, kuzoba ngcono umphumela we-3D. Isibonelo, ukuthatha isithombe sendawo eyisicaba kungavimbela ukwakheka kobukhulu besithombe. Bona ngezansi ukuthola isibonelo sendlela esikwenzile ngayo!
Qinisekisa ukuthi into isekhona: Uma uthwebula umuntu noma isilwane, qiniseka ukuthi bahlala besesikhundleni esifanayo kuso sonke isithombe esithathwa (uzokhunjuzwa ngalokhu ku-LucidPix App!)
Hlela into phakathi nendawo kwesikrini: Ngemiphumela emihle kakhulu, zama ukubeka isihloko maphakathi kwesikrini ukuqondisa ukugxila kuso futhi uqinisekise ukuthi isihloko esikhulu asishiyi uhlaka lwesithombe!
Dlala uzungeze ngezihloko ezahlukahlukene: Ilukuluku yilokho okushukumisayo ukuthatha isithombe esihle se-3D, ngakho-ke zama izinto ezahlukahlukene, vala izisekelo, izizinda, nokuningi ukuqhathanisa imiphumela yakho ubone ukuthi yini esebenza kahle! Uma ufuna ugqozi oluthile, zibheke Ama-pexels futhi Unsplash ukubona ukuthi hlobo luni lwezithombe lapha!
Joyina umphakathi: Leli thiphu lokugcina lifaka ukujoyina ngenkuthalo ukuhlanganyela kwesithombe se-3D amaqembu kanye namakhasi ukuze abe yingxenye yomphakathi obanzi. Ukwazi ukwaba izithombe zakho, ukuhlola ikhasi, ukuxhumana nabantu abanjengomqondo, funda kwabanye, futhi okubaluleke kakhulu, ugqugquzeleke! Uma ufuna amakhasi we-Facebook okumele awalandele, hlola Izithombe ezinhle kakhulu ze-LucidPix 3D futhi Izithombe zeLucidPix ze-3D ku-Facebook!
Ungazakha Kanjani Izithombe Ezimnandi Zokudla ze-3D nge-LucidPix →← Uhlelo lokusebenza oluphezulu lwezithombe ze-3D ze-Instagram